Mooyyaleetti waraanni cimaan deema jira . Mooyyaleen balbala tokkicha Oromoon guutuun Adunyaa biraa ittiin qunnamuuf qabdudha. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosMooyyaleetti waraanni cimaan deema jira . Mooyyaleen balbala tokkicha Oromoon guutuun Adunyaa biraa ittiin qunnamuuf qabdudha.
Dhimmi Mooyyale Dhimma Oromoo hundaati . Dabaaf cubbuun Mooyyaletti barootaaf deemaa jirtu tun akka cabduuf Oromoon guutuun dhimma kanaaf tokkummaan dhaabbattee sagalee dhageesissuu irraa hamma diina balbala tokkicha kana nu harkaa cufuuf deemu dhabamsiisutti qabsaa’udha qaba. Balbala tokkicha Oromoo kana tiksuu Ilmaan Oromoo Boorana fi Gabraa barootaaf itti dhumaa jiru. Oromoon guutuun duula Mooyyaletti deemaa jiru kana hordofuudha qaba.
Hayyuuf beekaan Oromoo hundi baroota cunquursa darban keessatti karaa kanaan biyya alaatti baqatanii bahuun kutaalee aduunyaa hunda dhaqabuu dandahaniiru. Hardha diinni karaa hedduun ijaaramee balbala tokkicha qabnu kana nutti cufuuf duula hamaa nuratti gegeessaa jira.
Kanaaf dhimmi Mooyyalee dhimma guutuu Oromoo akka tahe hubbachuun Oromoon hunduu bifa qindoomina qabuun duula kana ifirraa qolachuudha qaba.
Guyya Arra Tanna 12.12.2018
OROMIYA Kibba Magala Moyale
Liyyu Polisi SOMALE Umata Fixxa Jiran
ለብሔራዊ ዕርቅ ኮሚሽን የተመለመሉ ግለሰቦች #47 ላይ ያለው ነገራ (እውነት ከሆና) እኔን አይወክልም!!
If Tamirat Nagera is among those who are repatriated to the National Co-Investigation Commission, Dr. Abiy is working hard to kill oromo natioinalism in silence
Qeerroo Aanaa Leemmuuf Bilbiloo Eengadda Asallaa irratti.
Qeerroo Ta waa sodaa qabne, Kaabinee Dullattii Aanaa haga Gandaa uummata irratti fe’amtee Karoora Mallas Baaseef Qabattee Deemtu ammas Uummata akkuma Kaayyoo dur saniin kan laaltu hattoonni ta rakkoo uummaraa hin furre, ta akkuma dur yoo uummanni Waa dubbate afaan keessa dhahuu feetu, Warra Abbaa garaa ni jirti ammas.
የኦህዴድ ሹመኞችና ካድሬዎቻቸው ፊንፊኔ ላይ ሰልፍ ከተወጣ ችግር ይፈጠራል፣ጉዳት ይደርሳል ብለው እንደፈሩ ይገልፃሉ።